#FreeRebecca: Melohin’ny Global Voices Afrika Atsimon’i Sahara ny fisamborana an-tondromolotra sy ny fihazonana an’i Rebecca Enonchong, mpitarika resaka teknôlôjia ao Kamerona · Global Voices teny Malagasy
Mbola ao am-pihazonana tsy misy vesatra anenjehana azy i Enonchong
Voadika ny 13 Aogositra 2021 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Español, Italiano, English
Rebecca Enonchong. Sary avy amin'ny UNCTAD Photo/Jean Marc Ferré, via Wikimedia Commons, 3 Avrily 2019 (CC BY-SA 2.0)
Feno tebiteby ny ekipa Global Voices Afrika atsimon'i Sahara raha nandre fa nosamborina tamin'ny 10 aogositra 2021 sy nohazonina ao amin'ny Légion de Gendarmerie Dla ao Douala, renivohitra ara-toekaren'i Kamerona, i Rebecca Enonchong (@africatechie), iray amin'ireo vehivavy manana anjara toerana goavana eo amin'ny sehatry ny fihariana ara-teknôlôjia sady mpandala ny zo ankihihihy (dizitaly). Tsy misy taratasy ny fisamborana avy amin'ny mpitsara, ary tsy nampahafantarina ny vahoaka ny vesatra anenjehana azy.
Enonchong no mpanorina sady CEO [FTJ:Filoha Tale Jeneraly]ny AppsTech, sady avo vava handalàna ny teknôlôjia, ny zo ankihihihy, ny fitantanam-panjakana demaokratika ary ny fanajana ny zon'olombelona ho foto-panorenana ny fihariana tsara ao Afrika. izy aloha dia iray amin'ireo loharanom-baovao be mpanaraka sy itokisana indrindra amin'ny vaovaon'ny teknôlôjia Afrikana ao amin'ny Twitter, manana mpanjohy mihoatra ny 122.000. Efa nahangona loka maro ihany koa izy ka anisan'izany ny lisitra Forbes taona 2014 amin'ireo vehivavy folo mpanorina ny teknôlôjia mila jerena ao Afrika.
Naorina tamin'ny taona 2004, ny Global Voices dia seha-baovao iray mahaleotena mampifandray ny blaogera sy ireo olon-tsotra mpilaza vaovao isan'andro manerana izao tontolo izao, mampiasa ny aterineto ho fitaovana hananganana fokonolona manerantany tsy voasakan'ny (fahasamihafam)-piteny sy (fahasamihafan-)kolontsaina. Tohanan'ny Global Voices ihany koa ny zo ankihihihy, fahalalaham-pitenenana ary ny zon'olombelona manerantany.
Ifampizaran'i Enonchong sy ny ekipa Global Voices Afrika atsimon'i Sahara ny soatoavina fanajana ny zon'olombelona sy ny zo ankihihihy (dizitaly-nomerika) ato amin'ny kaontinanta.
Ny zavatra ataon'ny zandarimarian'i Kamerona amin'i Enonchong dia fanitsakitsahana ny zony tsy hosamborina an-tondromolotra ka hohazonina amin'izany.
Fanampin'izany, angatahinay ny governemanta kameroney hanatontosa ny adidiny ao anatin'ny Fanambaràna Manerantany ny Zon'Olombelona, ka anisan'izany ny fiarovana sy ny fanajana ny zon'ny olompirenena manoloana ny fisamborana tsy fihazonana tsy ara-dalàna.
29 Jolay 2021Angola